Raysal Wasaaraha Israa’il Oo Shaacinaya Arrin Culus Oo Ku Saabsan Boqortooyada Sacuudiga |
Raysal Wasaaraha Israa’il Oo Shaacinaya Arrin Culus Oo Ku Saabsan Boqortooyada Sacuudiga
Israel (GNN):- Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa daaha gadaashiisa ka shaqeynaya isaga oo doonaya in la wanaajiyo xidhiidhka u dhaxeeya maamulka Yahuuda Israel iyo boqortooyada Sacuudiga.
Wararka ayaa sheegaya in ra’iisul wasaare Netanyahu hadafkiisu uu yahay in la abuuro xidhiidh wanaagsan oo u dhaxeeya labada dowladood ka hor doorashada 2019 ka dhacaysa Israel, waxaana howshaasi ka shaqeynaya madaxa Sirdoonka Israel Yossi Cohen.
Mr Cohen ayaa masuul ka ahaa fududeynta Booqashadii Netanyahu 26-Bishii October uu ku tagay dalka Cumaan, waxaana xiligaasi ujeedada socdaalkiisa uu ahaa inuu dhiso xidhiidhka kala dhaxeeya Sacuudiga.
Netanyahu ayaa garab istaagay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan kadib markii uu cambaareeyn kala kulmay caalamka, isaga oo ku eedeysan inuu lahaa amarkii lagu dilay Wariye Jamaal Kashoqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
Warbixino laga soo xigtay diblumaasiyiin sar sare ayaa sheegay in Israel ay xiriiro kala duwan la sameysay dalal badan oo carabta ah si loo xisaabiyo ama loola socdo danaha Iran sida ka muuqata Sacuudiga.
Netanyahu ayaa intii uu ku sugnaa dalka Cumaan wuxuu sheegay iney jiri doonto booqasho uu ku tagayo dalal kale oo Muslim ah, kuwaasi oo hadda Israel xiriir wanaagsan iyo xiriir diblumaasi uusan kala dhaxeyn.
Wasiirka arrimaha dibadda Baxreyn Sheikh Khalid Al Khalifa ayaa xiisadda kiciyay waxaana uu sheegay in wadanka Baxreyn uu noqon doono wadanka labaad ee uu booqan doono Netanyahu, wuxuuna Twitter-kiisa sidaasi kusoo qoray isla maalintii uu Netanyahu joogay dalka Cumaan.
“Inkastoo Khilaafka jiro, Mr Benjamin Netanyahu wuxuu meel muhiim ah ka joogaa muhuumadda hergelinta xasiloonida gobolka Sidoo kale Sacuudiga ayaa door ku lahaan kara arintan”ayuu yidhi Al Khalifa.